महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण पूरा पढ्नु होस । – Sidha Kura
बिष्णु माझीको पहिलो अन्तरबार्ता? लुक्ने कोठा देखि श्रीमानसम्मको रहस्य (भिडियो हेर्नुस्)
मुख्य पृष्ठ /रोचक/महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि किन बैंस आउछ ? यस्तो छ कारण पूरा पढ्नु होस ।
भनिन्छ नि चालिसे लागेछ बैस जागेछ । यो उखान पहिलेको बुडापाकाहरुले भन्ने गरेका हुन । बुडापाकाका अनुसार जिवनमा पहिलो १६ वर्ष र दोख्रो ४० वर्षमा गरी २ पटक बैस जाग्छ रे ।यस्तैमा आज हामी आज तपाईहरुलाई महिलाहरुको ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका कारणहरुका बारेमा जानकारी गराउन गईरहेका छौं । विवाह पश्चात मानिसहरु वैदेशिक रोजगारी, पश्चिमा रहनसहन जस्ता विभिन्न कारण श्रीमान–श्रीमती एक अर्काप्रति चासो नदेखाउने, एक अर्काको भावनाको कदर नगर्ने जस्ता समस्याले अन्ततः कतिपयको सम्बन्ध विच्छेद पनि भएको छ ।
विवाह पछि सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या बिवाह पछि पनि सम्बन्धमा रहन्छन् । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध कारणहरु छन् ।१. विवाहपछि पुरुषले श्रीमती र छोराछोरीको जिम्मेवारी उठाउने क्रममा श्रीमतीलाई वेवास्ता गर्न पुग्छन् । र जिम्मेवारी सँगसँगै रोमान्स र समय दुवैमा कमी आउँछ जसको कारण महिला दोस्रो पुरुषसँग आर्क्षित हुन्छन् ।
२. सानै उमेरमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका महिलाहरु विवाहपछि उनीहरु अनेक सामाजिक बन्धनमा रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।जसका कारण उनीहरु जीवन अर्कै मोडमा आइपुगेको र आफ्नो जीन्दगीमा अमूल्य समय खेर गएको अनुभव गर्छन् । जसको कारण उनीहरु विवाहेत्तर सम्बन्धतर्फ उद्धत हुन्छन् ।३. महिलाहरु अग्लो कद, ह्ष्टपुष्ठ शरीर र चम्किलो अनुहार भएको पुरुषसँग छिट्टै आर्किषत हुने भएकाले दोस्रो पुरुषको सानो सानो कुरामै आकर्षित भइहाल्छन्
४. ४० वर्षपछि महिलाहरुले आफ्ना पार्टनरबाट यौन सन्तुष्टी नपाउने भएकाले दोस्रो पुरुषतर्फ आकर्षित हुने अध्ययनमा उल्लेख छ ।५. विवाहपछि आउने अनेक समस्या र परिवर्तनपछि महिलाहरुमा बच्चा भइसकेपछि झनै धेरै परिपक्कता आउनसक्छ । तर आफ्ना पतिप्रतिको विश्वास भने कम हुँदै जान्छ ।उनीहरु बच्चा भइसकेपछि पतिले आफूलाई वेवास्ता गर्छ भन्ने सोच्छन् जसका कारण बाहिर साथी बनाउन तिर लाग्छन् ।